१३ वर्षिया बालिकामाथि ९ जनाले २४ घण्टासम्म सामुहिक बलात्कार गरे, सबै ट्रक चालक रहेको खुलासा ! | Citizen FM 97.5 Mhz
१३ वर्षिया बालिकामाथि ९ जनाले २४ घण्टासम्म सामुहिक बलात्कार गरे, सबै ट्रक चालक रहेको खुलासा !
एजेन्सी, २४ घण्टाको अवधीमा एक १३ वर्षिया बालिकालाई तीन पटक सम्म ९ जना पुरुषले सामुहिक बलात्कार गरेका छन्। उक्त घटना मध्ये प्रदेशको उमरिया जिल्लामा घटेको थियो । ११ देखि १२ जनवरी सम्म निरन्तर बालिकालाई बलात्कार गरिएको थियो ।
सामूहिक बलात्कार गर्ने सम्पूर्ण ट्रक चालक रहेको खुलेको छ । उनीहरुले निरन्तर एक पछि अर्काले बालिकामाथि बलात्कार गरिरहेको थियो । उनलाई यस प्रकारको यताना दिइयो कि उनी त्यस घटनापछि राम्रो संग बोल्न पनि सकेकी छैनन् । बालिकालाई अपहरण गरी सुरुमा उनलाई दूई जना चालकले बलात्कार गरे, त्यसपश्चात अन्य पाँचले उनको बलात्कार गरे र अन्य दूई जनाले भोलिपल्ट बलात्कार गरेका टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ । पछि उनलाई राजमार्गमा बिभत्स अवस्थामा ट्रकबाट फालिएको थियो ।
टाइम्स अफ इन्डियामा लेखिएको रिपोर्ट अनुसार चार जना चालकले उनको सामूहिक बलात्कार ४ जनवरी मैै गरेका थिए । तर, ती बालिकाले डरको कारण कसैलाई भन्ने हिम्मत गरेकी थिइन् । राजमार्गमा रहेका ढावाका मालिकको मद्दतले प्रहरीले ९ जना मध्ये सात जनालाई हिरासतमा लिएका छन् । अन्य दूईलाई प्रहरीले खोजी रहेको जनाइएको छ ।
कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रा आफ्नो कक्षा सकाएर घर फर्किने क्रममा दिँउसो उनको अपहरण गरिएको थियो । र, उनलाई जंगलमा लगिएको थियो । उनलाई जंगलमा दूई जना चालकले बलात्कार गरेका थिए र पछि उनलाई ट्रकमा राखी ढावा लगिएको थियो । ढावामा गएसंगै उनको फेरि बलात्कार गरिएको थियो । बलात्कारको क्रममा अन्य चार चालकले मिलेर बालिकाको बलात्कार गरेको पिडितले रिपोर्टमा जानकारी गराएकी थिइन् । बालिकाको निरन्तर दूई दिनसम्म बलात्कार गरी पछि उनलाई बाटोको बीचमा फालिदिए ।
बाटोको बीचमा उनले मद्दत माग्न खोज्दा अन्य ट्रक चालकले समेत उनलाई ट्रकमा राखी पुनः बलात्कार गरेका थिए । उनको परिवारले लगातार दिन र रात खोजे अन्ततः बालिका हराएको रिपोर्ट प्रहरीमा दर्ज गराएका थिए । बालिकालाई फेरि बीच बाटोमा ट्रक चालकले फालिदिए तैपनि उनको श्वास चलिरहेको थियो । मद्दतको क्रममा उनले प्रहरी देखपछि उनले आफ्नो बारेमा बताइन् ।
जनवरी १२ मा उनलाई फेला पारिएको थियो । उनको अवस्था निकै कमजोर थियो । उत्पिडनमा परेका कारण उनलाई स्पष्ट बोल्न समेत गाह्रो भएको थियो । उनलाई २० घण्टा सम्म काउन्सिेलिङ गरिएको थियो । त्यस पश्चात उनले सबै कुरा स्पष्ट रुपमा भनिन् । अनुसन्धानको क्रम भने जारी रहेको छ । बालिकाको नाम भने गोप्य राखिएको छ । श्रोत रिपोटर्स नेपाल
ओली र प्रचण्ड-नेपाल समुहबीच झडप वडा अध्यक्षको टाउको फुट्यो ! ६ वटा टाँका लगाइयो !
काउली बुढीको सामाजिक संजालमा हट अवतार हेर्नुहोस !